myTuner Radio Pro, henoy ny radio amin'ny iPhoneo, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Omaly, andro voalohan'ny taona, nampahafantariko anao rindranasa telo azontsika alaina maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra, ho fampiharana telo voalohany an'ny maro izay avy amin'ny Actualidad iPhone dia hasehonay anao mba hanararaotra ny tolotra samihafa atolotry ny mpandrindra sasany anay. Iray amin'ireo fiasa mety tsy hahitan'ny mpampiasa maro amin'ny iPhone Ny mety ahafahana mihaino ny onjam-peo ankafizintsika nefa tsy mila mampiasa ny tahan'ny angon-drakitra na amin'ny alàlan'ny fifandraisana Wifi, toy ny hoe vitantsika amin'ny alàlan'ny terminal Android maro izany, saingy zavatra izay tsy hampiharin'i Apple velively.
Ho an'ireo rehetra mila filàna maika isan'andro ny fihainoana ny onjam-peo, dia asehonay anao anio a fampiharana izay ahafahantsika mihaino ny onjam-peo rehetra manerantany. Fa manolotra antsika ihany koa ny fahafahan'ny fihainoana ireo podcast ankafizintsika, ka lasa lasa mahafinaritra be ho an'ny mpampiasa maro. myTuner Radio Pro, manana vidiny mahazatra 2,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana.
MyTuner Radio Pro dia manasongadina
Ny gara tsara indrindra sy be mpihaino indrindra eran'izao tontolo izao.
Toerana miisa 30.000 no azo avy amin'ny firenena mihoatra ny 120.
Mifanaraka amin'ireo podcast rehetra misy amin'ny iTunes sy serivisy hafa.
Azontsika atao ny misafidy gara amin'ny anarany, firenena, karazany, lazany ary tanàna
Azontsika atao ny mamorona ny lisitry ny gara tena tianao
Mihainoa ireo gara afara ao ambadika
Vakio ny vaovao farany momba ny mozika
myTuner Radio dia mifanaraka amin'ny Apple Watch
myTuner Radio Pro dia manana salanisa 4 kintana amin'ny 5, Izy io dia mifanaraka amin'ny Apple Watch ary na dia amin'ny Apple TV aza, zavatra izay zara raha misy fampiharana firy amin'ity karazana ity manome antsika. Raha te hiasa tsara ny rindranasa, ny myTurner Radio Pro dia mitaky farafaharatsiny iOS 8 na taty aoriana, ary mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod Touch.
myTuner Radio Pro€ 10,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » myTuner Radio Pro, henoy ny radio amin'ny iPhone-nao, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Awesome Voice Recorder Pro, amidy mandritra ny fotoana voafetra